Maninona KingHow - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
KingHow dia mpanamboatra kitapo rehetra ho an'ny ety ivelany, gym fanaovana fanatanjahan-tena, fitsangatsanganana ary fomba fiainana. Ny vokatray dia misy ny kitapo baseball Equipment, Fishing Tackle Bags, Hunting Bags, Shooting Bags, Ice Hockey Bags, camping bags, Sports Bags, Daily Backpack, Laptop Bags, Golf Bags, Baseball Gloves sns. mpamatsy kitapo sy valizy ho an'ny mpividy manerantany. Manolotra serivisy feno izahay ho an'ny fanontanianao OEM sy ODM miaraka amin'ny vidin'ny orinasa mpifaninana.
Mangarahara sy fahamarinana
Ny fananganana ny fahatokisana izay tokony hataonay dia ny mangarahara tanteraka aminao. Ny ekipanay dia misy afaka manome anao ny fampahalalana amin'ny antsipiriany rehetra tianao ho fantatra momba anay, momba ny fizotranay na koa ny antsipirian'ny kajy vidinao.
Ny maodelin'ny orinasantsika dia ny andraikitra sy ny fahombiazana. Hainay ny habetsaky ny risika ateraky ny mpividy rehefa mifampiraharaha amin'ireo mpanamboatra harona sinoa. Ny orinasa dia tokony hiantoka ny kalitao sy ny vidiny tsara aloha.
Ny kitaponay dia mety mifanaraka amin'ny fenitra Iraisampirenena toa ny TOV, CSCV, SGS, TUV, ITS, REACH sns. Manome toky ny kalitaonay izahay, raha tsy mahatanteraka ny fanolorantenany izahay dia mandray andraikitra feno, mamerina ny entana na mamerina ny vola aminao.
Miaraka amin'ny traikefanay manan-karena, afaka manolotra lamba, kojakoja na endrika hafa endrika izahay hanatsarana ny vidiny hahatratrarana ny tanjon'ny tetik'asa. Hotsaroanay hatrany ny farafahakelinao takiana amin'ny kalitao amin'ny fikarohana sy ny vahaolana.
Ny rafitra famokarana sy fitantanana malefaka dia hiantoka ny kalitao sy ny habetsany, manome ny fotoana fandefasana haingana indrindra amin'ny indostria izahay amin'ny lafiny rehetra eto amin'izao tontolo izao. Raha ny mahazatra dia 35-40 andro ny fotoana itarihantsika.
Mba ho azo idirana, hamaly haingana ny mailakao sy ny fanontanianao, hanampy anao amin'ny famoronana vokatra sy hitady vahaolana, ireto no sasany amin'ny hevitra novolavolain'i King How mba hanomezana fahafaham-po bebe kokoa ny mpanjifanay.
Resaka sy fifanakalozana
Rehefa manomboka mino ny mpividy fa tena manolo-tena amin'ny fahafaham-pon'izy ireo isika, afaka manomboka mifanakalo sy miresaka lalina amin'ny andrasan'ny mpividy. Misy ny ekipanay hanome anao soso-kevitra sy vahaolana.